I-PRISM: Uhlaka Lokuthuthukisa Ukuguqulwa Kwakho Kwemidiya Yezokuxhumana | Martech Zone
Iqiniso ukuthi ngokujwayelekile awuthengisi eziteshini zemithombo yezokuxhumana kepha ungakhiqiza ukuthengisa okuvela ezinkundleni zokuxhumana uma usebenzisa inqubo ephelele yokuqeda.
Uhlaka lwethu lwe-PRISM 5 isinyathelo inqubo ongayisebenzisa ukwenza ngcono ukuguqulwa kwemithombo yezokuxhumana.
Kulesi sihloko sizobe sichaza indlela ye- Uhlaka lwezinyathelo ezi-5 futhi ungene ngamathuluzi wesibonelo ongawasebenzisa esinyathelweni ngasinye senqubo.
Ukwakha i-PRISM yakho udinga ukuthi ube nenqubo enhle, okuqukethwe namathuluzi afanele. Kuzo zonke izinyathelo ze-PRISM kunamathuluzi ahlukile afanelekile.
Ukuze uphumelele ezinkundleni zokuxhumana udinga ukuba nezethameli. Udinga ukwakha izithameli ngokungaguquguquki kepha futhi udinga ukuhlaziya izithameli zakho ukuze uqiniseke ukuthi izithameli ziyafaneleka. Akunangqondo ukuba nabalandeli abayisigidi esisodwa uma kungafanelekile.
Ithuluzi lesibonelo okufanele ulisebenzise yi- Affinio enikeza ukuwohloka okuningiliziwe kubalandeli bakho be-Twitter. Ungasebenzisa ithuluzi mahhala uma unabalandeli abangaphansi kuka-10,000. Kuwo wonke amapulatifomu udinga ukuhlaziya izithameli zakho njalo ukuze uqiniseke ukuthi ziyafaneleka.
Ukwenza izilaleli zakho zikunake, udinga ukwakha ubudlelwano nezilaleli zakho. Wakha ubudlelwano esikalini usebenzisa okuqukethwe noma wakhe ubudlelwano ngesisekelo se-1 kuye ku-1 nabathonya ababalulekile.
Ukuze wakhe ubudlelwano udinga ukusebenzisa ithuluzi lokuphatha imithombo yezokuxhumana njenge I-Agorapulse. I-Agorapulse izokhomba abantu ekusakazeni kwakho abangabathonya noma abantu abahlanganyela nawe njalo. Awukwazi ukwakha ubudlelwano nawo wonke umuntu ngohlobo lwe-1 kuye ku-1 ngakho-ke udinga ukubheka abagqugquzeli noma abahlanganyeli.
Mina we-Inbound Traffic
Iziteshi zemidiya yezenhlalo akuyona eyokudala ukuthengisa ngakho-ke udinga ukusebenzisa amasu athile wokushayela ithrafikhi isuka ezinkundleni zokuxhumana iye kuwebhusayithi yakho. Ungashayela futhi ithrafikhi ngezinye izindlela, ngokwesibonelo, usebenzisa ibhulogi.
Ithuluzi elilodwa elihle lokukusiza ukukhomba amagama angukhiye ukudala okuqukethwe nxazonke Semrush. Isibonelo, ungafaka igama lezimbangi zakho bese uthola izinhlanganisela ezingamagama aphezulu ezingama-10 zokushayela ithrafikhi kusayithi labo. Ngemuva kwalokho ungadala okuqukethwe okuzungeze lawa magama angukhiye noma okufanayo.
S Yababhalisile Nokubuyiselwa Komphakathi kabusha
Iningi labavakashi bakho bezenhlalo ngeke lithenge ekuvakasheni kokuqala ngakho-ke udinga ukuzama ukuthwebula imininingwane yabo usebenzisa i-imeyili. I-Optinmonster ingenye yamathuluzi wokuthwebula we-imeyili angcono kakhulu atholakalayo.
Uma izivakashi zinganikeli ngekheli lazo le-imeyili usengakwazi buyisela emuva lezi zivakashi ngezikhangiso ku-Facebook noma amanye amapulatifomu.
Ngemuva kwalokho udinga ukwakha imingcele yokuthengisa eguqula izivakashi zakho noma ababhalisile be-imeyili baye ekuthengiseni. Enye yezingxenye ezibaluleke kakhulu ekwenzeni imali ukusetha isilinganiso kuzo zonke izinyathelo zofele wakho. I-Conversionfly iyithuluzi elihle lokwenza lokhu.
Imithombo yezokuxhumana ilungele ukwakha izethameli nokwazisa ngawe, inkampani yakho, imikhiqizo kanye nezinsizakalo zakho.
Kepha…. kuhle futhi ukukhiqiza ukuthengisa uma usebenzisa inqubo ephelele yokuphela. Udinga ukuqonda zonke izigaba zenqubo yokuthengisa komphakathi futhi usebenzise amasu athile futhi usebenzise amathuluzi athile esigabeni ngasinye.
Ungalusebenzisa lolu hlaka ekuthengiseni imithombo yezokuxhumana?
Tags: ezokuxhumana ezithuthukileukuguqulwa kwensimbimarketing kwangaphakathiithrafikhi engenayoukwenza imaliI-PRISMuhlaka lwezokuxhumanaukwenza imali ezinkundleni zokuxhumanaubudlelwano bezokuxhumanaukubuyisela emuva emphakathiniukubhalisela ukubuyela emuva